Buyaas - သင် Pregabalin အကြောင်းသိထားသင့်အရာအားလုံးကို
Pregabalin (148553-50-8) အများအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောဒေသများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Lyrica အောက်မှာကိုရောင်းသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ anticonvulsant အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြောင်း anti-epileptic ဆေးဝါးပါပဲ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသိမ်းယူမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဦးနှောက် Impulses သတင်းပို့နှေးကွေးရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pregabalin ခန္ဓာကိုယ်အာရုံကြောစနစ်ကိုဖြတ်ပြီးနာကျင်မှုအချက်ပြပေးပို့သောဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းသက်ရောက်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းထိုကဲ့သို့သော fibromyalgia, ဆီးချိုရောဂါများနှင့်ပင်ကျောရိုးဒဏ်ရာဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အာရုံကြောဝေဒနာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဝဒေနာဆက်ဆံဖို့ဆေးပညာလောကမှာရှိတဲ့အသုံးပြုသည်။
Pregabalin တောင့, တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်, ဒါမှမဟုတ်ကာလကြာမြင့်စွာသရုပ်ဆောင်တက်ဘလက်များတည်ရှိခြင်းနှင့်လည်းပါးစပ်ဖြေရှင်းချက် (အရည်) ၌တည်၏။ အားလုံး Pregabalin ပုံစံများကိုအတူတူလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်, သင်၏ဆရာဝန်ကသင့်အခွအေနေဒါမှမဟုတ်ဘာကိုသင်သောက်သုံးသောသံသရာ၏အဆုံးအားဖြင့်အောင်မြင်ရန်ချင်ပေါ် မူတည်. အဘို့အညာဘက်ကိုတဦးတည်းကိုရှေးခယျြဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်းပုံမှန်ထိုးနှင့်အတူ unconformable နေသောအများအပြားလူနာအတွက်အကောင်းဆုံးနာကျင်မှုမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ overdosed သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားအခါမူးယစ်ဆေးလည်းအချို့သောပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သင်အမြဲပိုကောင်းရလဒ်များကိုများအတွက်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Pregabalin (148553-50-8) လည်းအနည်းဆုံးလေးအဟောင်းနှစ်နှင့်အရွယ်ရောက်သူအသက်ကလေးတွေအတွက်စတင်ခြင်းသိမ်းယူမှု၏ကုသမှုကူညီအခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူတွဲသုံးနိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, မူးယစ်ဆေးကြောင့်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးဖြစ်ပွားနာကျင်မှု-သက်သာရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တဦးတည်းအောင်, ဆေးပညာလောကရှိအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသာပိုကောင်းရလဒ်အတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့အညွှန်းအောက်မှာယူရပါမည်။ သို့သော်အမြဲသင်ပတ်လည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူများမှ Pregabalin get သေချာပါစေ။
2.လုပ်ဆောင်ချက် Pregabalin ယန္တရား
Pregabalin ဆေးဝါးများတစ်ခု anticonvulsants လူတန်းစားကပိုင်ဆိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုတူညီသောလမ်း၌ဤအတန်းအစားအလုပ်အတွက်မူးယစ်ဆေးနှင့်အလားတူအခြေအနေများ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာ Pregabalin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးင်ပေမယ့်သိမ်းယူမှုသို့မဟုတ်ဝဒေနာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပျက်စီးအာရုံကြောချအေးဆေးမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်ယုံကြည်ထားပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များသို့မဟုတ်ရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝေဒနာလျော့နည်းစေသည်။ Pregabalin အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့သင့်ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။
အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစုတှငျ Pregabalin ကဲ့သို့သောရောဂါများကုသရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အတည်ပြုခဲ့ပြီး;
အခါရေယုံပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သော post-herpetic neuralgia သို့မဟုတ်ဝဒေနာ
ဆီးချို neuropathy နာကျင်မှုနဲ့
Fibromyalgia ထိုကဲ့သို့သောကြွက်သား, ဆက်တစ်ရှူး, ဒါမှမဟုတ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်မထိဖို့နာကျင်တုံ့ပြန်မှု၌ရှိသကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းဝေဒနာ, ပါဝငျကွောငျးကနျြးမာရေးအခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများခုနှစ်တွင်ဥရောပတိုက်တွင်ကဲ့သို့ Pregabalin စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, အခြားဆေးဝါးများအမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကုသရန်အသုံးပြုကြသည်တဲ့အခြေအနေကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Pregabalin ကိုလည်းရလဒ်များကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ဆရာဝန်များလည်း Pregabalin ကကုသသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများနှင့်အတူလူနာဖို့ဆေးဝါးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Pregabalin သောက်သုံးသောကုသမှုအောက်မှာအခြေအနေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အများဆုံးတစ်နေ့လျှင် 25mg နေစဉ်သို့သော်နိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသော, 600mg ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုသောက်သုံးသောထားမည်။ တစ်ခါတစ်ရံဆေးပညာအချိန်နှင့်အတူချိန်ညှိနိုင်သည့်အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်သင်တို့ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်သင်၏ဆရာဝန်နောက်ထပ်သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ Pregabalin သောက်သုံးသော အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏;
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆီးချို Neuropathy သောက်သုံးသော
ချက်ချင်း-လွှတ်ပေးရန်, ကနဦးသောက်သုံးသောတနေ့သုံးကြိမ်ယူသင့်ကြောင်း 50mgs ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပထမသောက်သုံးသောတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်သည့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်းသုံးကြိမ်တစ်ရက်ယူခံရဖို့ 100mg ရန်သင့်ဆရာဝန်တိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးစစ်ကုသမှုတိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်မှာ, Pregabalin သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 300mg ဦးရေအများဆုံးမှဆန့်နိုင်ပါသည်, သို့သော်အချိန်နှင့်အတူအမှုကိုပြုရပါမည်။ Beginners အမြဲတမ်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါတိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်တကြိမ်တစ်နေ့လျှင် 150mg ပါးစပ်ထိုး၏ကနဦးသောက်သုံးသောယူရန်သင့်အားလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အဲဒါကသင်ကညစာစားပြီးနောက်ယူကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်နေ့စဉ် 330mg အများဆုံးထိုးမှတက်ဖို့သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ဆရာဝန်ကသင့်တိုးတက်မှုနှင့် Pregabalin ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သည်းခံစိတ်ကို examine ပြီးနောက်သောက်သုံးသောတို့၏စီးပွါးကိုသာဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ (ကိုသတိရပါသည် Pregabalin ညှိကြဘူး148553-50-8သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏လမ်းညွှန်မှုမပါဘဲ) သောက်သုံးသော။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏ဆေးမှူးများကသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းသောက်သုံးသောပုံမှန်အတိုင်းနံနက်သောက်သုံးသောယူ switching ပါလိမ့်မည်သောနေ့ထို့နောက်သင့်ညစာစားပြီးနောက်သစ်ကိုသောက်သုံးသောကိုစတင်ပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတစ်နေ့လျှင် 600mg အထိမြင့်မားဆေးညွှန်းကိုယူပြီးမဆိုအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးတော်မမူကြောင်းထင်ရှားပြီ။ ထို့ကြောင့်သင်ကအကြံပြုထိုးကပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ကတည်းကတစ်နေ့လျှင် 300gm မှအများဆုံး 330 ယူပြီးလည်းအကြံပြုသည်မဟုတ်။
Postherpetic Neuralgia အရွယ်ရောက်ပြီးသူထိုး
ဒီမှာဆေးညွှန်းနှစ်ခုအမျိုးအစား, ချက်ချင်း-လွှတ်ပေးရန်နှင့်တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်သို့ခွဲခြား, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဆေးညွှန်းထဲမှာကွာခြားလျက်ရှိသည်။ ဥပမာ, ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်အတွက်ကနဦး Pregabalin ထိုးနေ့ရက်ကာလ၌နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဆေးညွှန်းခွဲခြားသောတစ်နေ့လျှင် 150mg မှ 300mg ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူပဲ, ဆေးညွှန်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနဦးသောက်သုံးသောတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်တစ်နေ့လျှင် 300 မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ရလဒ်အထင်ကြီးလျှင်ဆရာဝန်ကတိုးမြှင့်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိရပါလိမ့်မယ်။ ဆေးဘက်လည်းသင်အနိမ့်ဆေးညွှန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးယူကိစ္စများတွင်နောက်ထပ်သောက်သုံးသောကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းကိုနှစ်ခုမှလေးပတ်ကြာများအတွက် 300mg သောက်သုံးသောယူပြီးနှင့်နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးမလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်, ဆရာဝန်နှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ယူခံရဖို့နေ့စဉ်အကြောင်းကို 600mgs ကပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သတိရပါတစ်နေ့လျှင် 600mg လူနာအားလုံးအမြင့်ဆုံးကိုထောက်ခံအုကူံသောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြင်းထန် Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, အရာ reverse ရန်ခက်ခဲသို့မဟုတ်အကုန်အကျဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာကနဦး Pregabalin သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာယူသင့်ကြောင်း 165mg ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင်ကညစာစားပြီးနောက်ယူကြောင်းအကြံပြုပါတယ်။ သောက်သုံးသောသံသရာ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်း 330mg မှထပ်မံတိုးမြှင့်ခံရဖို့အတွက်သောက်သုံးသောအဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုပြီးနောက်သို့မဟုတ်ဆေး၏ပတ်ပြီးတော့သင့်ဆရာဝန်တစ်နေ့လျှင် 660mgs သောအများဆုံးဖို့သောက်သုံးသောမြှင့်နိုင်ခြင်းဝေဒနာမရှိသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုလည်းမရှိ။ အဆိုပါဆေးညွှန်း switching အခါ, ထို့နောက်သင့်ညစာစားယူပြီးပြီးနောက်တိုးချဲ့-လွှတ်ပေးရန်ဆေးစတင်ရန်နံနက်ယံချက်ချင်း-လွှတ်ပေးရန်တဦးတည်းယူပါ။
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကုသမှုများအတွက်ကနဦးပါးစပ်သောက်သုံးသောနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်သို့ကွဲပြားသောတစ်နေ့လျှင် 150mg ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံကအခြားကုထုံးဆေးညွှန်းထဲမှာလိုပဲဆရာဝန်တစ်နေ့လျှင် 600mgs မှဆေးထိုးတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးလည်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်နေ့ရက်ကာလ၌ယူခံရဖို့ပိုင်းခွဲထားရမည်။ ဤတွင်အများဆုံးသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် 600mg ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါငျးတို့သမူးယစ်ဆေးရဲ့သောက်သုံးသောအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှု gabapentin နှင့်အတူ Pregabalin ပေါင်းစပ်ပြီး၏အရေးပါမှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော်သင်၏ဆရာဝန်ကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့အဘယ်အရာကိုမူးယစ်ဆေးပိုငျသညျအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင်ကနဦးဆေးထိုး 75mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ယူသည်နှင့်နှစ်ခုကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သောက်သုံးသော၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်း 150mg မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောလည်းတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ယူခံရဖို့နောက်ထပ် 225mg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ fibromyalgia များအတွက်အများဆုံးသောက်သုံးသော 450mgs နှင့် 300mg အကြောင်း 450mg တစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လေ့လာမှုများတစ်နေ့လျှင် 600mgs ယူပြီးမဆိုအပိုဆောင်း Pregabalin အကျိုးကျေးဇူးများကိုမပူဇော်ဘူးသို့သော်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုပြသပါ။
Neuropathic နာကျင်မှုများအတွက် Pregabalin
ကနဦးဆေးထိုးတစ်နေ့လျှင် 75mg နှင့်လည်းတစ်နေ့လျှင် 150mg မှတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရက်သတ္တပတ်သောက်သုံးသောပြီးနောက်မရှိသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုလည်းမရှိ, ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဆေးမှူးတ 300mgs မှအထက်သို့ကချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပြုကို Maintenance သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင်ခှဲဝေဆေးညွှန်း 150mg မှ 600 ကနေနေကြပါတယ်။
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Dihydroboldenone / DHB ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
ဆေးပညာလောကရှိ, က Pregabalin အဆိုပါသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အရည်အသွေးနှင့်အထင်ကြီးရလဒ်များကိုကယ်တင်တတ်၏ကွောငျးထငျရှားပါပဲ။ ပထမဦးဆုံး 2004 အတွက်မူးယစ်ဆေးအတည်ပြုကတည်းကလူနာသန်းပေါင်းများစွာအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောက်ရူးပြန်ရောဂါ Post-herpetic neuralgia သို့မဟုတ်ဝေဒနာအခါရေယုံအပြီးပေါ်ပေါက်ကြောင်း, ဆီးချို neuropathy နာကျင်မှုနဲ့ Fibromyalgia အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများမှရရှိလာတဲ့အာရုံကြောဝေဒနာစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် Pregabalin ကနေအကျိုးပါပြီ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် Pregabalin နှင့်အတူဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုပေါ် မူတည်. သင်တစ်ဦးသည်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမှာရလဒ်ခံစားရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
သောက်သုံးသော၏ပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်အောက်သို့သို့မဟုတ်အထက်သို့အဆိုပါသောက်သုံးသောကိုထိန်းညှိဖို့ရှိမရှိအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသင်၏အတိုးတက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းသင့်ဆရာဝန်ကိုပေးသည်။ လေ့လာရေးသင်သောက်သုံးသော၏ပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ထားသင့်ကြောင်းပြသပါ။ Pregabalin တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီး, သငျသညျ, ထို့ကွောငျ့, ဝေဒနာသောက်သုံးသော၏အစောပိုင်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်သက်သာရာခံရဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။ အမှု၌သင်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်သောက်သုံးသောညှိရန်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား, သင့်ထိုးတာ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းမည်သည့်တိုးတက်မှုတွေ့ကြုံခံစားကြဘူး။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်အခြားသူတွေလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောလျင်မြန်စွာအဖြစ်ရလဒ်များကိုရအော်တိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သင်တို့အဘို့ဆေးအောက်မှာသောအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးရလဒ်တွေကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်၏အချို့ Pregabalin ရလဒ်များကို ပါဝင်သည်;
ထိုသို့သောအရံဆီးချို neuropathy, ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု-သွေးဆောင် neuropathic နာကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ် Fibromyalgia အဖြစ်အာရုံကြောပျက်စီးမှုကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဝဒေနာအသေးအဖွဲမှကြွလာသောအခါ Pregabalin တစ်အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများ Pregabalin neuropathic ဝဒေနာကိုလျှော့ချအတွက်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးကြောင်းပြသပါ။ တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်ပင်ကိုသုံးသည့်အခါတခြားကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်နဲ့ပေါင်းစပ်သောအခါဖြည့်စွက်ထိရောက်သောနေဆဲဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Fibromyalgia သင်ကျယ်ပြန့်နာကျင်မှုကနေဆငျးရဲဒုက်ခအဘယ်မှာရှိအခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေအိပ်စက်ခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်, စိတ်ကျရောဂါ, ပူးတွဲများနှင့်ကြွက်သားတောင့်တင်း၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလူနာသမျှသောဤသက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။
FDA က (Pregabalin အတည်ပြု148553-50-8) ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဦးနှောက်ဒဏ်ရာရမှုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အကြံပြုသည်။ တခြား Anti-epileptic ဆေးဝါးများလုပ်ကိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့ကြကြောင်းလူတို့အဘို့တစ်ခုတွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်။
အမေရိက၏ United States မှာ, Pregabalin စိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချဖို့အသုံးမသော်လည်း, ဥရောပ၌, မူးယစ်ဆေးအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ Pregabalin ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ၏ကုသမှုအတွက်ကူညီရန် Off-တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့ဆိုပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကလိုအပ်သော Pregabalin သတ်မှတ်နှင့်နေဆဲအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှာတှေ့နိုငျသောအခါအခြို့သောအထောက်အထားမဲ့သာဓကလည်းရှိနေပါသည်။ ရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်နှစ်ဦးစလုံးဆေးဖက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများဒီမူးယစ်ဆေးကိုထိရောက်စွာပြင်းထန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကပိုဒီတော့အရွယ်ရောက်မှအလယ်အလတ်ပြုမူဆက်ဆံနိုင်သောဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အရည်အသွေးအ Pregabalin ရလဒ်များကိုမှလျှို့ဝှက်တပြင်လုံးကိုသောက်သုံးသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သင်၏ဆရာဝန်ပါဝင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ဆေးဝါးအသိပေးမရှိဘဲ Pregabalin သောက်သုံးသောညှိမထားပါနဲ့။ အဖြစ်အများကြီးသင်အလွယ်တကူကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းစတိုးကနေမူးယစ်ဆေးယ်ယူနိုင်ပါသည်အဖြစ်တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုစစ်ဆေးမှုများ-Up တို့အတွက်သွားစရာမလိုဘဲကြောင့်ယူပြီး start ပါဘူး။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဝေဒနာသက်သာရာအတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တချို့ကအားကစားသမားလည်းကြွက်သားဝဒေနာကိုထိန်းချုပ် Pregabalin ကိုသုံးခြင်းနှင့်ကြောင့်အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲဖို့ဘုံနေသောကျောရိုးဒဏ်ရာဝေဒနာ။
ဤသည်တက်ကြွစွာနဲ့အစာရှောင်သရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်ပါသည် Pregabalin တစ်ဝက်ဘဝ6နာရီ။ ထို့ကြောင့်, ပိုကောင်း Pregabalin ရလဒ်များကိုအဘို့, ဆေးညွှန်းနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတစ်နေ့လျှင်သုံးခွဲခြားရပါမည်။ သငျသညျအကြိုးရလဒျရဖို့အတှကျကတိုတောင်းတဲ့ဖျက်သိမ်းရေးဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်ကတည်းကတစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်း, ကလွယ်ကူစေသည်။ အမြဲတမ်းသင့်ဆရာဝန်ကပေးတဲ့သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်ကပ်ဖို့သတိရပါ။ သငျသညျနိမ့်ဆုံးသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးသောက်သုံးသောယူရင်တောင်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထက်ဝက်-ဘဝတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။
သင်က overdose လျှင်ရုံစျေးကွက်အပေါ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ယနေ့ကဲ့သို့ Pregabalin လည်းပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ၏အများစု Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအဆိုးဓာတ်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်တခါတရံ၏ရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်ထို့နောက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်သင်၏ဆေးဝါးအားဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အနိမ့်ဆေးညွှန်းနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်ရဲ့အဘယ်ကြောင့်ပါပဲ။ အသုံးအများဆုံး Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာပါဝင်သည်;
မူးဝြေခင်းဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကထိနမိဒ္ဓကိုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, -sometimes ဒါပေမယ့်အချိန်အတန်ကြာပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသင့်ပါတယ်။
အတော်များများက Pregabalin အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းအလှည့်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်မှုအရာ, တိုးမြှင့အစာစားချင်စိတ်များညည်းညူ။
ဤသူအပေါင်းတို့သည် Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့အချိန်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်သူတို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုရှည်နေဖို့အမှု၌, သင်အခွအေနေပိုဆိုးလာရင်ရှေ့တော်၌ကိုယ်အဖြေတစ်ခုရဖို့ကူညီရန်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျခကျြခငျြးသငျသညျသူတို့ကိုကြုံနေရ start, သူတို့ပါဝင်သည်သင်၏ဆေးဝါးကိုဆက်သွယ်သင့်ကြောင်းအချို့ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်;
Vision ၏ပြဿနာများ, သငျသညျကို double ရူပါရုံကိုဖြစ်စေ, မှုန်ဝါးသောရူပါရုံကိုကြုံနေရစတင်ဖို့သို့မဟုတ်သင့်အမြင်အာရုံအတွက်မဆိုစသောအပြောင်းအလဲတှနျ့ဆုတျပါဘူးယခုအချိန်တွင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်ကိုခေါ်ပါ။
မျက်နှာ, ပါးစပ်နှုတ်ခမ်း, မျက်စိ, လည်ချောင်း, လျှာ, လည်ပင်း, ဒါမှမဟုတ်ဦးခေါင်းကိုဖြစ်ပွားမှုရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းချက်ချင်းသတင်းပို့ရပါမည်။
သည်အခြားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်; အရည်ကြည်ဖု, ယားယံခြင်း, ခြေဆစ်များရောင်ရမ်းခြင်း, အောက်ပိုင်းခြေထောက်, လက်, လက်မောင်းသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်ဝေဒနာ။
သတငျးကောငျးကိုသငျသညျအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအဆင့်မြင့်သက်ရောက်မှုသင်၏ဆေးဝါးအသိပေးမရှိဘဲသောက်သုံးသောယူပြီးဆက်လက်ပါဘူးတွေ့ကြုံခံစားလာသောအခါအချို့သောအခြေအနေများအချိန်နှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်သင်ကအချိန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားလျှင်ဤအရာအလုံးစုံ Pregabalin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်အခြေအနေကမထိန်းချုပ်လျှင်အဆိုပါသောက်သုံးသောရပ်တန့်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအကြံပြု, သင်တို့အဘို့ဘေးကင်းဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကဈေးကွက်အပေါ်အများဆုံးဖြစ်ပွား Anti-epileptic ဆေးဝါးယနေ့အကြားဖြစ်ကိုယ်နှိုက်ကသက်သေထူထားပါတယ်တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖြတ်ပြီး neuropathic ဝေဒနာမှသက်သာရာရစေရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, နှင့်ဥရောပတူသောအချို့တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ပြုလုပ်စိုးရိမ်စိတ်၏ကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးတဲ့အခါသင်ပျော်မွေ့မည်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, Pregabalin အကျိုးကျေးဇူးများကို အရာအောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏;
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ Pregabalin အဆိုပါသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသောသူအပေါင်းတို့သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထင်ရှားပြကြပြီ။ neuropathic ဝဒေနာအဘို့ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့အဘို့ကိုသင်တောင်သင်ပထမဦးဆုံးထိုးတာပြီးနောက်တိုးတက်မှုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အတွင်း, သင်အပြည့်အဝရလဒ်တွေကိုကြုံနေရစတင်သင့်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဖြစ်စဉ်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ အဘယ်သူမျှမရလဒ်များအမြဲအထင်ကြီးဖြစ်ကြသည် Pregabalin သုံးပြီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်အရေး။
Pregabalin နှုတ်တော်ထွက်အမှတဆင့်အုပ်ချုပ်သောကြောင့်, ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိထိုးရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကပုံမှန်ထိုးနှင့်အတူမသက်မသာနေသောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုဆေးဝါးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်ဝေဒနာအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုပါ, သင်အလွယ်တကူသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသကဲ့သို့ရှည်လျားသည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူဤမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူလိုက်ပါလာနိုင်ပါတယ်။
သည်အခြားပါးစပ်ဆေးဝါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Pregabalin မှန်မှန်နှင့်အရည်အသွေးရလဒ်များသငျသညျအာမခံထားသည့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကတစ်ဦးရှည်လျားသောတက်ကြွအသက်, ရှိပါတယ်။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကုသသောအခြေအနေပေါ် မူတည်. သင်သာအကြောင်းကိုနှစ်ခုမှသုံးကြိမ်တစ်နေ့လျှင်အဘို့သင့်ထိုး ယူ. တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ညစာစားပြီးနောက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် အမြောက်အများအတွက် Pregabalin အမှုန့်ကိုဝယ် ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာတရားဝင်ဖွင့်ကတည်းကအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အနီးဆုံးဆေးဆိုင်မှသင်၏သောက်သုံးသောသံသရာအတွက်သို့မဟုတ်ရုံအလုံအလောက်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းဘယ်မှာဝယ်ရန်သင့်အားပြသခွင့်လူတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကလွယ်ကူသငျသညျဥပဒေနှင့်အပဍိပက္ခများမဆိုစိုးရိမ်မှုတွေမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူရန်နှင့်သုံးစွဲဖို့စေသည်။
Pregabalin သည်အခြား anticonvulsants နှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရန်သင့်အားဖျောထုတျ။ သင်သာထိုကဲ့သို့သောသောက်သုံးသော၏ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်းအခြားသူတွေအကြားခေါင်းကိုက်ခြင်း, အန်, အဖြစ်ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်, သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျနံနကျစောစောအလုံအလောက်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုအဆင့်မြင့်သက်ရောက်မှုကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပိုကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်ကိုအသိမပါဘဲမည်သည့်သောက်သုံးသောချိန်ညှိအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်စေပါဘူးသေချာပါစေ။
အမျိုးမျိုးသော Pregabalin ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာရှာနေကြောင့်အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုသူတို့ကမူးယစ်ဆေးယူပြီးပြီးနောက် get ရလဒ်ကိုကျေနပ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲ။ Pregabalin မှန်မှန်တစ်နာကျင်မှု-သက်သာရာမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်သုံးစွဲသူအများစုအနေဖြင့်အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များကလည်းကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ရှိချက်များတင်သွင်းကြနှင့် FDA ကဝက်ရူးပြန်ရောဂါ Post-herpetic neuralgia သို့မဟုတ်ဝေဒနာအခါရေယုံအပြီးပေါ်ပေါက်ကြောင်း, ဆီးချို neuropathy နာကျင်မှုနဲ့ Fibromyalgia ၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ကအတည်ပြုလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပါပဲ။
ဥရောပမှာကဲ့သို့ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, Pregabalin သည့်လူကြီးများအကြားစိုးရိမ်စိတ်များကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုထားသည်။ သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူအဆိုးဆုံးအတှေ့အကွုံခဲ့ရှိရာအချို့အနည်းငယ်အစီရင်ခံဖြစ်ပွားမှုလည်းရှိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးလူ့ကောင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်နှင့်အဲဒါကိုသင်၏အဆွေခင်ပွန်းကကူညီပေးခဲ့ရုံဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့အဘို့အလိုအလျှောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏အခြားအမှုပေါင်း overdosing နှင့် Pregabalin ၏အလွဲသုံးစားမှုများမှစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။
မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်လက်ျာအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးပြုရသောအခါအချုပ်ထဲမှာ, ဒီဟာကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မီးမောင်းထိုးပြသကဲ့သို့, ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများကိုခံစားနေရပြီးလူသနျးပေါငျးမြားကူညီပေးခဲ့တယ်။ သင့်ဆရာဝန်သင်တို့အဘို့ကအကြံပြုထားသည်မဟုတ်လျှင်ရုံကိုအခြားဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးလိုပဲသင် Pregabalin မယူသင့်ပါတယ်။ အမှု၌သင်တို့ကိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရသည်လည်းသူတို့ကိုသင်ကျော်လွှားကူညီရန်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြား။
10 ။ရောင်းရန် Pregabalin
ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်, ယနေ့, သင်လုပ်နိုင်သည် Pregabalin အမှုန့်ကိုဝယ် တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ platform ပေါ်တွင်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ကလွယ်ကူသင်တယောက်ကိုတယောက်ထုတ်ကုန်ကနေစီမံကိုင်တွယ်အဖြစ်စက္ကန့်အတွင်းသင့်ရဲ့အမိန့်ကိုလုပ်ရန်အဘို့အအောင်, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်။ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုမှတဆင့်ကြှနျုပျတို့၏ website ကိုဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, ငါတို့သည်ဤလောကကိုဖြတ်ပြီးနှင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်အတွင်းမှာပေးပို့ပါစေ။ သင်သည်သင်၏သောက်သုံးသောသံသရာအဘို့အပင်ပဲအလုံအလောက်အမြောက်အများအတွက် Pregabalin ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဒေသအတွက်ဦးဆောင် Pregabalin ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနေကြသည်, ငါတို့တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအလျှော့ပေးလိုက်လျောပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း store မှာရညျအသှေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ယူပြီး start မတိုင်မီသူတို့တစ်တွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုခံယူကြောင်းသေချာစေရန်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြံပြုသည်။ အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ် overdosed လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ရောင်းရန် Pregabalin သင့်ရဲ့အနီးဆုံးဆေးဆိုင်မှာကိုလည်းရရှိနိုင်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှရသေချာပါစေ။ အားလုံးကတော့အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဘက်စတိုးဆိုင်များအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။
11 ။အာရုံကြောနာကျင်မှုကိုနှင့်တော့ပူပန်ဆက်ဆံဖို့ Pregabalin
ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, Pregabalin လေ့ neuropathic နာကျင်မှုအဖြစ်လူသိများအာရုံကြောဝေဒနာ၏ကုသမှုတွင်ပိုမိုဒီတော့ဆေးပညာလောကရှိမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအလှည့်အတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အဆင့်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်မူသောသင်တို့အာရုံကြောမှအချက်ပြမှုများကိုပေးပို့သောဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အမေရိကား FDA က၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထိုကဲ့သို့သောက်ရူးပြန်ရောဂါ, Fibromyalgia Post-herpetic neuralgia သို့မဟုတ်အခါရေယုံများနှင့်ဆီးချို neuropathy နာကျင်မှုပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သောဝဒေနာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အာရုံကြောဝေဒနာကုသမှုအတွက် Pregabalin အတည်ပြုခဲ့သည်။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Off-တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုကြောင်းအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်ပေမယ်သို့သော် Pregabalin (148553-50-8), US မှာစိုးရိမ်စိတ်များကုသမှုများအတွက်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဥရောပမှာကဲ့သို့ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်, Pregabalin လူကြီးများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏ကုသမှုကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pregabalin စိတ်ကျရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်နေရာအတည်မပြုနိုင်အစီရင်ခံစာများလည်းရှိပါတယ်။ Pregabalin အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်သို့မဟုတ်သင့်ဆေးဝါးတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး။
Kim က, SC, Landon, je, & ရှောလမုန်, DH (2013) ။ လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ဆေးဝါး fibromyalgia လူနာအကြားအသစ်သတ်မှတ်ထားသော amitriptyline, duloxetine, gabapentin, ဒါမှမဟုတ် pregabalin အသုံးပြုသည်။ အဆစ်စောင့်ရှောက်မှု & သုတေသန, 65(11), 1813-1819 ။
Goodman, CW, & Brett, AS (2017) ။ အဘို့အ Gabapentin နှင့် pregabalin စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအကြောင်းမရှိမညွှန်ကြားတိုးမြှင့်နာကျင်မှု-ဖြစ်ပါတယ် ?. ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 377(5), 411-414 ။
lam, DM, Choi, SW, Wong, အက်စ်အက်စ်, Irwin, MG, & ဖြစ်သောချုံကောင်း, CW (2015) ။ တစ်ဦး Meta-analysis သည်: ကွဲပြားခြားနားသောခွဲစိတ်အမျိုးအစားအောက်မှာစူးရှ postoperative နာကျင်မှုအတွက် Pregabalin ၏ထိရောက်မှု။ ဆေးဝါး, 94(46) ။
Baldwin, DS, Ajel, K. , Masdrakis, VG, Nowak, အမ်, & Rafiq, R. (2013) ။ တစ်ခု update ကို: အထွေထွေစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက် Pregabalin ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါနှင့်ကုသမှု, 9, 883 ။